China 201 inopisa inopisa akakungurusa Stainless simbi ndiro kugadzira uye fekitari | Huaxiao
Ukobvu hwesimbi isina makimbi 201 yaikosha kupfuura 1.2mm, kuti iine imwe acid uye alkali kuramba, kukwirira uye zvichingodaro, iko kugadzirwa kwezviitiko zvakasiyana, tambo yekumashure butiro rezvinhu zvemhando yepamusoro. Inonyanya kushandiswa pombi yekushongedza, pombi yeindasitiri, zvimwe zvigadzirwa zvisina kudhirowa.
Sino Stainless Simbi Kugona nezve 201 Hot akakungurusa Stainless simbi ndiro, 201 HRP, PMP
Nhovo uremu: 1.0MT-6.0MT
201 Same giredhi kubva kwakasiyana mill mill
201 Chemical chikamu LISCO – L1:
C: ≤0.15, Si: ≤1.0 Mn: 8.0-10.5, Cr: 13.5～16.00, Ni: 1.0～3.0, S: .00.03, P: .00.06 Cu: <2.0, N≤0.2
201 michina chivakwa LISCO – L1:
Kukwidziridzwa (%):> 35%
Zvakasiyana pakati pe220 (L1, J1) uye 202 (L4, J4) simbi isina simbi uye coil
201 na202 simbi isina ngura zvinhu zviviri zvakajairika simbi zvinhu, zviri zvemazana maviri esimbi simbi isina waya, saka ndeupi mutsauko uripo pakati pezvinhu zviviri izvi? Pamusoro pezvinyorwa zvakasiyana zvezvinhu zvinokonzerwa nezvakasiyana zvigadzirwa, ndeapi mutsauko chaiwo mune chaiwo mashandisirwo uye hunhu? Ngatitarisei zvakanyanya nhasi.
Muindasitiri yesimbi isina chinhu, 201 inomiririra chinhu. 201 simbi isina tsvina, inoreva izwi rakajairika reti 201 simbi isina simbi uye simbi inomira asidi. 201 simbi isina simbi inoreva simbi inopesana neura nehutete husina kusimba senge mweya, chiutsi nemvura, nepo asidi isina simbi inoreva simbi inopesana nehuro nemakemikari anogadzira zvinhu seasidhi, alkali uye munyu. Iyo yenyika standard modhi ndeye 1Cr17Mn6Ni5N. Iyo elemental manganese (uye nitrogen) ye 201 isina simbi ndiro inotsiva imwe kana yese nickel kuburitsa yakaderera nickel zvemukati izvo zvisingasvike kuenzana uye zvinogadzira ferrite. Naizvozvo, iyo ferrochrome yemukati mune 200 akateedzana simbi isina chinhu yakaderedzwa kusvika 15% -16%, kunyangwe pasi kusvika pa13% -14%, saka kuramba kwayo ngura hakugone kufananidzwa ne304 nedzimwe simbi yakafanana.
202 simbi isina ngura ndeimwe yemakumi maviri akateedzana simbi isina simbi, yenyika yakajairwa modhi ndeye 1Cr18Mn8Ni5N. Iyo mazana maviri akateedzana simbi isina simbi yakadzika nickel yakakwira manganese simbi ine nickel yemukati uye manganese zvemukati ingangoita 8%. Iyo nickel-nickel simbi isina chinhu. 202 chiratidzo cheAmerica, pachinzvimbo che1Cr18Ni9. Austenitic simbi dzesimbi dzinoonekwa nenzvimbo dzakakwirira tembiricha tembiricha uye nokudaro dzinogona kushandiswa simbi dzisingadziye kupisa. Kuti iite iyo austenitic simbi yesimbi simbi inoshanduka, inofanirwa kudziirwa kumusoro kwe1000 ° C, uye pa350 ° C, simbi yesimbi haina kuchinja, ndiko kuti, kushanda kwesimbi hakuchinje zvakanyanya. Ichangozvimba nekuda kwekupisa, asi hazvizo shanduke zvakanyanya. Mumamiriro ezvinhu akajairwa, inogona kuregeredzwa. Neichi chikonzero, 202 simbi isina chinhu ine yakanaka yepamusoro tembiricha kuramba. Ndiko kuita uku, 202 simbi isina chinhu inoshandiswa zvakanyanya mukushongedza kwekushongedza, mainjiniya enjiniya, nzira huru dzekuchengetedza, zvivakwa zvehotera, zvitoro, magirazi ekubatira, zvivakwa zveveruzhinji nedzimwe nzvimbo. Yakagadzirwa neepamusoro-chaiyo otomatiki pombi-yekugadzira michina, iyo inoumbwa nekuzvicheka-yega uye kuwelda, yakakungurutswa uye kuumbwa, uye izere negasi kudzivirira (mukati nekunze kwepombi) isina chero simbi yekuzadza. Iyo nzira yekutungidza ndeye TIG maitiro uye online solid mhinduro eddy yazvino chikanganiso kuona.
Kubva pakuona kwegiredhi, makumi maviri nemaviri anopfuura manganese uye anodarika matatu nickel. Mukushandisa kunoshanda, maererano nekushandisa, 202 iri nani zvishoma pane 201, asi vazhinji vevashandisi vemusika vanobvuma 201 yezvinhu zvekushongedza chubhu nemutengo wakaderera uye chinhu chinoshanda chakafanana ne202.202 ine chromium uye manganese zvishoma kupfuura 201, uye iyo michina uye ngura kuramba zviri nani zvishoma, asi kunyatso kutaura, iko kuita musiyano pakati pemasimbi maviri esimbi hakuna kukosha, kunyanya mukumira kwehurosi.
Kune chete nuances pamusoro peiyo 201 uye 202 simbi isina chinhu, asi kuchine misiyano yakawanda mumamiriro chaiwo. Kubudikidza nekuunzwa kwechinyorwa chino, tinotarisira kubatsira vashandisi veindasitiri kuti vawane simbi isina simbi inokodzera zvigadzirwa zvavo kana uchitenga zvigadzirwa, uye nekuvandudza mashandiro ekushandisa. , kuchengetedza mari chaidzo
Pashure: Yakarurama simbi isina simbi coil
Zvadaro: 304 304L inopisa inopisa akakungurusa Stainless simbi yairema